FAQ -5- Learn to Speak English Online
မေး...........ဆရာ အင်္ဂလိပ်စကားပြောတွေမှာ ခနခဏတွေ့ရတဲ့ Like what?ဆိုတဲ့ဟာ နားမလည်ဘူး ဆရာ၊ ရှင်းပြပေးစေလိုပါတယ်။
​ဖြေ............စကားပြောမှာ အရမ်းအသုံးများပါတယ်။Like what? ( ဘာနဲ့တူလဲ၊ ဘာကဲ့သို့လဲ) ဆိုတဲ့ သဘောမျိုး အဓိပ္ပါယ်ရပါတယ်။ ဥပမာMegan: That girl over there was likeamodel.( ဟိုးနားက အမျိုးသမီးက မော်ဒယ် လိုပဲ )Michael: Like What? ( ဘာနဲ့တူတယ် ? ) ​မေး...cash နဲ့ money ဘာကွာလဲသိချင်ပါတယ်ဆရာ ​ဖြေ.....money ဆိုတာ..အထွေထွေသုံးစကားလုံးဖြစ်ပါတယ်။ ပိုက်ဆံအရေအတွက်ကို ဆိုလိုပါတယ်။ဥပမာ..မင်းမှာ ပိုက်ဆံဘယ်လောက်ရှိသလဲမင်း ခရက်တစ်ကဒ်ထဲမှာ ပိုက်ဆံဘယ်လောက်ကျန်သေးလဲ..စသဖြင့်ပေါ့။Cash ဆိုတာက...ပိုက်ဆံပုံသဏ္ဍန်ကိုဆိုလိုပါတယ်...ဥပမာ..ငါးထောင်တန်တစ်ထောင်တန် ၊ အကြွေစေ့ ဘယ်လောက်တန်စသဖြင့်ပေါ့....။ နောက်တစ်ခါcash နဲ့ပဲလက်ခံတယ်ဆိုတဲ့ဟာကြားဘူးမှာပေါ့...ဆိုလိုတာက...ခရက်တစ်ကဒ်ချက်စာရွက်နဲ့လက်မခံဘူး...ငွေသားသက်သက်နဲ့ပဲလက်ခံတယ်ဆိုတဲ့သဘော။ ​မေး......ဆရာ ``Yet´´ ဆိုတဲ့ဟာလေး ဆက်ပြီး ဘယ်လို ဘာသာပြန်ရမလဲ မသိတော့ဖူးဆရာတော်တော်များများ အခုနောက်ပိုင်း တွေ့လာတယ် ဆရာ ဒုတိယ sentence ကို Yet လေးနဲံ ဆက်တာလေ ၊ အဲ့တာ ဘယ်လိုလေး ဘာသာပြန်ရမလဲ ဆရာ ( Outside it was cold and misty.I had been givenasweater so that the change of climate would not bs too shocking, yet I immediately discovered that I took pleasure in the smell of fogs.)
ဖြေ.............Yet ကို စာကြောင်းနောက်မှာထားသုံးတာက....Adverb လိုသုံးတာYet ကိုစာကြောင်းရှေ့မှာထားသုံးတာက....Conjunction လိုသုံးတာ....Conjunction ( စကားဆက် ) လိုဆိုရင်......ဒါပေမဲ့ တစ်ချိန်ထဲမှာပဲ ( but at the same time )....ဒါပေမဲ့ ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်( but nevertheless ) လို့ အဓိပ္ပါယ်ရတယ်။The path was dark, yet I slowly found my way"( လမ်းက မှောင်တယ်...ဒါပေမဲ့ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်..ဖြေးဖြေးခြင်း လမ်းရှာတွေ့ပါတယ်) ​မေး......In the beginning , At the beginning ကွာခြားချက်
​ဖြေ..........နှစ်ခုလုံးက အစမှာ ဆိုတဲ့ အဓိပ္ပါယ်ရပါတယ်။In the beginning က အစ ဆိုတဲ့သဘောကို ခြုံငုံပြောတာဖြစ်ပါတယ်။သူ့ချည်းပဲသုံးပါတယ်။ ဥပမာIn the beginning we will discuss if it is really necessary to developa new product.At the beginning ဆိုတာကို...နောက်က Noun များနဲ့ကပ်သုံးပါတယ်။ဥပမာ...at the beginning of the month , at the beginning of the year.At the beginning of the next week, i'll visit Mr. Anderson.( မှတ်ချက်....များသောအားဖြင့်...at the beginning of လို့ အသုံးများပါတယ်)
မေး...​vocabulary မှတ်မိအောင်ဘယ်လိုလုပ်သင့်လဲ စာအုပ်ဖတ်ရင်းမသိလို dictionary ကြည်ရင် ကြည်တုန်းဘဲနောက်တခေါက်ပြန်တွေရင်မေ့ သွားရော ဆရာဘယ်လိုလုပ်သင့်ပါလဲ
အသုံးတွေနဲ့ တွဲမှတ်ပါ...ဥပမာ....hate ဆိုတာကို ကျက်ရင်..တွဲမှတ်ပါ...​Kelly hates her teacher.She hated the cold dark days of winter.hated - adjectiveHe was the most hated teacher in the school. ဝေါဟာရများကို အသားလွတ် လိုက်ကျက်တာမဟုတ်ပဲ စာများများဖတ်ပါ…စာထဲက မသိတဲ့ မီးနင်းများကို သေသေချာချာမှတ်ပါ…။ hate ဆိုတာကိုတွေ့ရင် မိမိဖာသာ စာကြောင်းများလိုက်သုံးကြည့်ပါ…။ မီးနင်းများများရဘို့ ကြက်တူရွေးကျက် မဟုတ်ပဲ…မိမိရတဲ့မီးနင်းများကိုပိုင်နိုင်ဘို့ကြိုးစားပါ….။ next